Weerar 5 askari ay ku dhinteen oo ka dhacay Gobolka Hiiraan.
Monday September 02, 2019 - 13:31:10 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ee dhaca bartamaha dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in weerar khasaara dhaliyay lagu qaaday ciidamo katiranaa maamulka isku magacaabay Hirshabelle.
Weerar maanta barqadii ka dhacay deegaanka Dulfaaleey oo dhaca duleedka degmada Jalalaqsi ayaa sababay dhimashada 5 askari iyadoona xoogaga Al Shabaab ay la wareegeen gacan ku haynta deegaankii lagu dagaallamay.
"Ciidamada Mujaahidiinta ayaa weeraray goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka Murtdiinta oo la yiraahdo dulfaaleey oo dhacda duleedka Jalalaqsi, weerarka waxaa lagu dilay 5 askari Afar qorina waa lagasoo qaniimeystay" ayaa lagu yiri war ay baahisay idaacadda Andalus.
Waa weerarkii ugu khasaaraha badnaa ee bishan gudaheeda ka dhaca gobolka Hiiraan balse bishii lasoo dhaafay weeraro khasaara dhaliyay ayay lakulmeen ciidamada Jabuuti ee Jalalaqsi ku sugan iyo maleeshiyaadka maamulka Hirshabelle.